Muridzi weMbira, Hosho neMarimba Odzidzisa Mimhanzi kuBotswana
Muimbi, Worseley Manzungu, uyo anoridza mbira, marimba nehosho nezvimwe, anoti shuviro yake ndeyekuti mumhanzi wake uziikanwe nevanhu vazhinji vemudunhu rekuchamhembe kweAfrica.
Manzungu, uyo akaberekerwa kuGokwe mudunhu reMidlands makore makumi mana nerimwe apfuura, ndokukurira muHarare, anoti akatanga kuridza ngoma aine makore gumi mushure mekudzidziswa nambuya vake avo vaaigara navo.
Hunyanzvi hwekuridza ngoma nehosho uhwo hwaakayamwa kunambuya vake hwakamupinda muropa izvo zvakaita kuti anodzidzira kuva mudzidzisi wezvemimhanzi nesvomu paMorgan Zintec College muHarare aine makore gumi nemasere.
Muna 2003, Manzungu akava pakati pevaimbi venziyo dzechinyakare avo vakanomirira Zimbabwe kuMaputo, Mozambique pasi pechirongwa cheUmoja Cultural Exchange Program, icho chaibatsirwa nemari nerimwe sangano rekuNorway reNorwegian National Organization of Cultural Schools.
Mushure mekuridza marimba nembira zvinonwisa mvura pabira iri, Manzungu anoti akatsikisa dambarefu rake rekutanga uye riri iro rega rinonzi Chivaraidze.
Pakati pa2005 na2021, Manzungu, uyo anodzidzisa zvidzidzo zvemimhanzi paNorthside Primary School mugura reGaborone muBotswana, anoti akatsikisa masingles matatu anoti Mindout, Zvichapera uye Kudya Kwangu.
Gore negore, Manzungu anoti ndiye aiva chamangwiza webira reMarimba Festival iro raiitirwa pachikoro cheThornhill Primary School muGaborone kubva muna 2006 kusvika ramiswa neCOVID-19 muna 2019.
Manzungu anoti mumhanzi wake unobata vanhu zvakasiyana uye nekupa vana veZimbabwe kurudziro yekuti vave netarisiro yeramangwana rakajeka pamwe nekukudza marimba nembira mudunhu riri kuchamhembe kweAfrica.
Chipo china Manzungu chakabva kuna ambuya vake avo vakamudzidzisa achiri mudiki zvokuti zvekuridza mbira, hosho nemarimba zvinhu zvava muropa rake.